Agha Westport na Agha Obodo America
History & Culture Agha Obodo Amerịka
Agha Obodo Amerịka: Agha Westport
Agha nke Westport - Esemokwu & Ụbọchị:
Emere Agha Westport n'October 23, 1864, n'oge Agha Mba Amerịka (1861-1865).
Agha Westport - Ndị agha & ndị na-enye iwu:
General General Samuel R. Curtis
Ọnụ ọgụgụ isi na-efu ọnyà
Agha Westport - Azụ:
N'oge okpomọkụ nke afọ 1864, Major General Sterling Price, bụ onye na-achịkwa ndị agha na Arkansas malitere ịrịọ onye isi ya, General Edmund Kirby Smith , ka o kwe ka ọ gaa wakpo Missouri.
Otu obodo Missouri, Ọnụahịa na-atụ anya ịghachite steeti maka Confederacy ma mebie President Abraham Lincoln nwegharigharị ọzọ ka ọ daa. Ọ bụ ezie na e nyere ya ikike maka ọrụ ahụ, Smith wepụrụ Ahịa ya. N'ihi ya, agha ahụ a na-aga na Missouri ga-ejedebe oke agha nke ndị agha ịnyịnya ibu. N'ịga n'ihu n'ebe ndịda 12,000 ndị na-agba ịnyịnya na August 28, Ọnụahịa gafere Missouri ma nye ndị agha Union n'otu Pilot Knob otu ọnwa mgbe e mesịrị. N'ịga n'ihu n'ebe St. Louis nọ, n'oge na-adịghị anya, ọ tụgharịrị n'ebe ọdịda anyanwụ mgbe ọ ghọtara na obodo ahụ na-agbachitere n'ụzọ dị ukwuu iji wakpo ya.
N'ịzaghachi mwakpo ahịa, Major General William S. Rosecrans , bụ onye na-achị Ngalaba nke Missouri, malitere itinye uche na ụmụ nwoke iji merie egwu ahụ. Ebe ọ bụ na e gbochiri ya ime ihe mbụ, Ọnụahịa gbanwere megide isi obodo dị na Jefferson City. Ogologo ugwo olu ndi ozo n'agbata ebe ahu mere ka o kwubie na dika St.
Louis, mgbidi obodo ahụ siri ike. N'ịga n'ihu n'ebe ọdịda anyanwụ, ọnụahịa chọrọ ịwakpo Fort Leavenworth. Ka ndị agha ndị agha na-agafe na Missouri, Rosecrans zipụrụ otu ndị agha ndị agha n'etiti Major General Alfred Pleasonton nakwa nkewa abụọ nke isi General AJ Smith na-edu.
Ndi agha nke Potomac, Pleasonton nyere ndi agha United agha agha na Brandy Station n'afọ gara aga tupu Major General George G. Meade adighi nma .
Agha Westport - Curtis azaghachi:
N'ebe ọdịda anyanwụ, Major General Samuel R. Curtis, na-elekọta Ngalaba Kansas, na-arụ ọrụ iji lekwasị anya n'òtù ndị agha ya izute ndị agha na-aga n'ihu. N'ịbụ onye na-eme Agha nke Ógbè ahụ, o kere ụsụụ ndị agha ndị isi nke General General James G. Blunt na otu agha nke ndị agha Kansas na-achị n'aka Major General George W. Deitzler. Ịhazi nkesa ikpeazụ ahụ siri ike dị ka Kansas Gọvanọ Thomas Carney na-ebido ịjụ arịrịọ Curtis ka ọ kpọọ ndị agha ahụ. Nsogbu ndị ọzọ gbasara banyere iwu nke ndị agha Kansas militia na-edozi e kenyere ndị òtù Blunt. E mechara kpebie na Curtis nyere iwu ka ọ bụrụ na ọhụhụ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ga-egbochi Ọnụahịa. Ibanye na Confederates na Lexington na October 19 na obere Blue River ụbọchị abụọ mgbe e mesịrị, a na-agbagha Blunt ugboro abụọ.
Agha Westport - Atụmatụ:
Ọ bụ ezie na ha meriri n'agha ndị a, ha mere ka ọnụahịa zuo oke ma mee ka Pleasonton nweta ala. N'ịmara na ndị agha niile nke Curtis na Pleasonton karịrị iwu ya, Ahịa achọrọ imeri Agha nke Ógbè ahụ tupu ya atụgharịa ndị na-achụ ya.
Mgbe Curtis laghachiri n'ebe ọdịda anyanwụ, Curtis gwara ya na ọ ga-eguzobe ihe nchebe n'azụ Brush Creek, dị n'ebe ndịda Westport (akụkụ nke Kansas City, MO) n'oge a. Iji wakpoo ọnọdụ a, a ga-achọ ego iji gafee Osimiri Big Blue wee tụgharịa gaa n'ebe ugwu ma gafee Brush Creek. Iji mezuo atụmatụ ya iji merie ndị agha Union n'ụzọ zuru ezu, o nyere iwu ka onyeisi General John S. Marmaduke sụgharịa Big Blue na Byram Ford na October 22 (Map).
Ike a ga-eme ka Pryasonton gbaghaa ụgbọ okporo ígwè ndị agha ma na nkewa nke Major Generals Joseph O. Shelby na James F. Fagan rutere n'ebe ugwu iji wakpo Curtis na Blunt. Na Brush Creek, Blunt depụtara brigades nke Colonels James H. Ford na Charles Jennison na-agba agba Wornall Lane ma na-eche ihu na ndịda, ebe nke Colonel Thomas Moonlight gbatịrị Union n'akụkụ aka nri n'akụkụ aka nri.
Site na ọnọdụ a, Moonlight nwere ike ịkwado Jennison ma ọ bụ wakpo Confederate flank.
Agha Westport - Brush Creek:
N'isi ụtụtụ n'October 23, Blunt mepụtara Jennison na Ford gafere Brush Creek na n'elu ụlọ. N'ịga n'ihu, ha tinyere aka na Shelby na ndị ikom Fagan. Na-enye ndụmọdụ, Shelby nwere ike ime ka Union gbanwee ma manye Blunt ka ọ laghachi azụ n'ofe mmiri ahụ. N'ịbụ ndị na-enweghị ike ịmalite agha ahụ n'ihi ụkọ mgboagha, a manyere ndị Confederates ịkwụsị ikwe ka ndị agha Union gbakọta. Ngalaba Curtis na Blunt na-ebuwanye ibu bụ ọbịbịa nke ndị agha Colonel Charles Blair tinyere ụda nke nkà ihe nkiri Pleasonton na ndịda na Byram Ford. N'ịbụ ndị a kwadoro, òtù ndị agha na-ebu agha na-agafe n'akụkụ mmiri megide onye iro ma ha gbaghaara.
N'ịchọ ụzọ ọzọ, Curtis hụrụ onye ọrụ ugbo ala, George Thoman, onye iwe banyere ndị agha Confederate na-ezu ohi ya. Thoman kwetara inyere Onye Ọchịchị Ndị Ọchịchị aka ma gosi Curtis gully nke na-agafe agafe aka ekpe Shelby ka e wee bilie na ndagwurugwu Confederate. N'iji ya mee ihe, Curtis duziri 11 nke Kansas Cavalry na nke 9 Wisconsin Batrị ka ha gafee ebe ahụ. N'ịwakpo Shelby, ndị a, ndị ọzọ na-ejikọta ọnụ site Blunt, malitere iji nwayọọ nwayọọ na-akwagharị Confederates n'ebe ndịda n'ebe Wornall House.
Agha Westport - Byram's Ford:
N'iji ụtụtụ Ford ahụ na-abịa, Pleasonton kpalitere brigades atọ gafere osimiri ahụ gburugburu 8:00 nke ụtụtụ. N'ịbụ onye na-anọ n'ugwu dị n'ofe nke ogige ahụ, ndị Marmaduke kwụsịrị ịwakpo Union mbụ ahụ.
N'agha ahụ, otu n'ime ndị isi ndị omempụ Pleasonton dara mmerụ, Lieutenant Colonel Frederick Benteen nọchiri anya ya, bụ onye ga-emesị mee òkè na 1876 Agha Little Littlehorn . N'ihe dị ka elekere 11:00 nke ụtụtụ, Pleasonton nwere ihe ịga nke ọma n'ịkwali ndị ikom Marmaduke site n'ọkwá ha. N'ebe ugwu, ndị ikom ahịa na-alaghachi na usoro nchebe ọzọ n'akụkụ okporo ụzọ nke ndịda Forest Hill.
Ka ndị agha Union wetara egbe agha iri atọ iji na-aga na Confederates, 44s Arkansas Infantry (Elu) na-ebubo n'ihu iji gbanye batrị ahụ. A na-ewepụ mgbalị a na Curtis mụtara banyere ụzọ Pleasonton si aga n'azụ na azụ nke onye iro ahụ, o nyere iwu maka ọganihu n'ihu ọha. N'ọnọdụ dị egwu, Shelby nyere ndị agha brigade ka ha lụọ ọgụ na-egbu oge mgbe Ọnụahịa na ndị agha ndị ọzọ gbaara na ndịda ma gafere Big Blue. N'ịbụ onye ọnụ na-eru nso na Wornall House, ndị ikom Shilby mechara soro.
Agha Westport - Izu:
Kiet ke otu akakan ekọn̄ oro ekenyenede ke Ufọkabasi The Trans-Mississippi, Agha Westport ama okụt ke n̄kan̄ mbiba ẹma ẹdu ke n̄kpọ nte 1,500. N'ịbụ onye e dere na " Gettysburg nke West", njikọ ahụ kwadoro nke ọma na ọ na-akụghasị iwu nke Ọnụahịa nakwa dị ka ịhụ ọtụtụ ndị nnọchiteanya Confederate hapụrụ Missouri na usuu ndị agha ahụ. N'ịbụ onye Blunt na Pleasonton na-agbaso, ihe fọdụrụnụ nke ndị agha Ọnụ Ahịa kwagara n'akụkụ ókèala Kansas na Missouri ma lụọ ọgụ na Marais des Cygnes, Mine Creek, Marmiton River, na Newtonia. Na-aga n'ihu na-alaghachi site na ndịda ọdịda anyanwụ Missouri, Ahịa wee si n'ebe ọdịda anyanwụ banye n'ókèala India tupu ha abata na Confederate lines na Arkansas na December 2.
N'ịbụ ndị na-erube isi, ike ya abụrụla ihe dị ka puku mmadụ isii, ihe dịka ọkara nke ike mbụ ya.
Nhọrọ ndị a họọrọ
Agha Obodo n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa: Agha Westport
CWSAC Agha Nchịkọta: Agha Westport
Agha Obodo Amerịka: Isi General Fitz John Porter
Agha Obodo Amerịka: Agha nke Seven Pines (Fair Oaks)
Agha Obodo Amerịka: General Robert E. Lee
Agha Ụwa M: HMS Dreadnought
Agha Obodo Amerịka: Agha nke Island Number Nkeji
Agha Obodo Amerịka: Agha nke Kennesaw Mountain
Agha Obodo Agha Amerịka: Agha nke Fort Wagner
Agha Obodo Amerịka: Isi General Ambrose Burnside
Agha Obodo Amerịka: March Sherman gaa n'Oké Osimiri
Agha Obodo Amerịka: Isi General Edward O. Ord
Agha Obodo Amerịka: Agha nke Fort Henry
Nrọ ụra nke Andersonville Mkpọrọ Mkpọrọ
Gịnị bụ Malaphors?
Otu esi eme ka nyocha onwe gi
Ejikere na-eme mgbanwe ndị isi nke ndị isi nke afọ 2020
Aha Ikpeazụ Peterson, Ihe Ọ pụtara na mmalite
Ọrụ KURT maka Kurtosis na Excel
Ihe Ngwongwo ihe n 'ulo akwukwo maka ndi nkuzi puru iche
Parole (asụsụ asụsụ)
Ọrụ nke Jar Jar Binks na Star Wars Universe
Ndị Nwunye Ndị Britain Na-enwetala Mmeri
Mụta Uche dị n'etiti Ọha, Ụlọ Akwụkwọ, na Ụlọ Akwụkwọ Ndị Ụlọ Akwụkwọ
Kedu ihe nhụjuanya asatọ ahụ?
Nchịkọta nke History History nke Polka
Okwu Ịgba Ọtali Ịtali: Spendere
HENDERSON Aha nna Aha na mmalite
Kedu ka esi 'C' kwupụta na French?
Ihe Nlereanya Kasị Mma nke Ndị Ọrụ Ọkachamara
Ndi Dinosaurs na ndi ozo nke Connecticut
Madonna - "Ibi Ndụ Maka Ịhụnanya"
E gosipụtara Ihe Nzuzo Siri Ike Ise
Pyramids - Ihe Ochie nke Oge Ochie nke Ike
Onye Mmalite Na-amalite Ịmalite Igodo
Nkọwapụta nke Mkparịta ụka Mkparịta ụka na Ihe Nlereanya